Ma W’ahonim a Wode Bible Atete no no Nkyerɛ Wo Kwan | Adesua
“Adwene a ɛwɔ ahyɛdeɛ yi akyi ne ɔdɔ a ɛfiri akoma a emu teɛ, ahonim pa ne gyidie a nyaatwom nnim mu.”—1 TIMOTEO 1:5.
NNWOM: 57, 48
Ɔkwan bɛn so na yɛn ahonim bɛtumi aboa yɛn ma yɛasisi gyinae wɔ nea ɛdidi so yi ho?
Nea yɛde gyegye yɛn ani.
1, 2. Hena na ɔmaa yɛn ahonim, na adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ ho anisɔ?
BERE a Yehowa Nyankopɔn bɔɔ nnipa no, ɔde obiara pɛ maa no, kyerɛ sɛ, na wɔn ankasa bɛtumi apaw nea wɔpɛ sɛ wɔyɛ. Nea ɛbɛyɛ na yɛatumi asisi gyinae pa no, Yehowa ama yɛn biribi a ɛbɛkyerɛ yɛn kwan. Wɔfrɛ saa ade a ɛkyerɛ yɛn kwan yi ahonim; ɛyɛ biribi a ɛwɔ yɛn mu a ɛma yɛhu nea ɛtene ne nea ɛntene. Sɛ yɛde yɛn ahonim di dwuma yie a, ɛbɛtumi aboa yɛn ma yɛayɛ adepa na aboa yɛn ma yɛakwati adebɔne nso. Yɛn ahonim yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ Yehowa dɔ yɛn, na ɔpɛ sɛ ɛsi yɛn yie.
2 Ɛwom sɛ nnipa bi a wɔwɔ wiase nnɛ nnim akwankyerɛ a ɛwɔ Bible mu deɛ, nanso wɔyɛ adepa na wɔkyi adebɔne. (Kenkan Romafoɔ 2:14, 15.) Adɛn ntia? Wɔn ahonim na ɛma wɔyɛ saa. Ahonim mma nnipa pii nyɛ bɔne. Sɛ onipa biara nni ahonim a, wo deɛ hwɛ bɔne a anka ɛbɛkɔ so wɔ wiase! Anka yɛbɛte nneɛma bɔne pii ho nsɛm asen nea yɛte no. Yɛda Yehowa ase paa sɛ ɔmaa nnipa ahonim!
3. Ɔkwan bɛn so na yɛn ahonim bɛtumi aboa yɛn wɔ asafo no mu?
3 Nnipa dodow no ara nnwene ho sɛ wɔbɛtete wɔn ahonim. Nanso, Yehowa nkurɔfo pɛ sɛ wɔn ahonim yɛ adwuma yie, efisɛ ɛbɛtumi aboa paa ma baakoyɛ atena asafo no mu. Yɛpɛ sɛ yɛn ahonim boa yɛn ma yɛkae Bible akwankyerɛ a ɛfa nea ɛtene ne nea ɛntene, papa ne bɔne ho. Nanso, sɛ yɛbɛtumi atete yɛn ahonim na yɛde adi dwuma yie a, ɛsɛ sɛ yɛyɛ pii sen sɛ yɛbɛsua nsɛm a ɛwɔ Bible mu kɛkɛ. Ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani gye akwankyerɛ a ɛwɔ Bible mu ho, na yɛgye di sɛ eye ma yɛn. Paulo kyerɛwee sɛ: “Adwene a ɛwɔ ahyɛdeɛ yi akyi ne ɔdɔ a ɛfiri akoma a emu teɛ, ahonim pa ne gyidie a nyaatwom nnim mu.” (1 Timoteo 1:5) Sɛ yɛtete yɛn ahonim na yɛde bɔ yɛn bra a, ɔdɔ a yɛwɔ ma Yehowa ne ne mu gyidi a yɛwɔ no bɛyɛ kɛse. Sɛnea yɛde yɛn ahonim bɔ yɛn bra no ma yɛhu sɛnea yɛne Yehowa abusuabɔ mu yɛ den fa, na ɛma yɛhu sɛnea yɛpɛ sɛ yɛsɔ n’ani. Yɛn ahonim san ma yɛhu nipa kõ a yɛyɛ.
4. Yɛbɛyɛ dɛn atumi atete yɛn ahonim?
4 Yɛbɛyɛ dɛn atumi atete yɛn ahonim? Ɛsɛ sɛ yɛsua Bible daa, yɛdwendwene nea yɛkenkan no ho, na yɛsrɛ Yehowa sɛ ɔmmoa yɛn mma yɛmfa nea yɛasua no mmɔ yɛn bra. Wei kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛsua nneɛma pii sen sɛ yɛbɛsua nokwasɛm ahorow ne mmara nko ara. Sɛ yɛresua Bible a, nea yɛde yɛ yɛn botae ne sɛ yɛbɛhu Yehowa yie. Ɛno ma yɛhu Onii kõ a ɔyɛ, na yɛhu nea ɔpɛ ne nea ɔmpɛ. Bere a yɛresua Yehowa ho adeɛ pii no, yɛn ahonim bɛma yɛahu nneɛma a Yehowa bu no sɛ ɛtene ne nea ɔbu no sɛ ɛntene no ntɛm. Dodow a yɛtete yɛn ahonim no, dodow no ara na yɛbɛtumi afi ase adwene nneɛma ho te sɛ Yehowa.
5. Dɛn na yɛbɛsusu ho wɔ adesua yi mu?
5 Yɛbɛtumi abisa yɛn ho sɛ: Sɛ yɛresisi gyinae a, ɔkwan bɛn so na ahonim a yɛatete no no bɛtumi aboa yɛn? Dɛn na yɛbɛtumi ayɛ de akyerɛ sɛ yɛbu yɛn yɔnko Kristoni ahonim? Ɛbɛyɛ dɛn na yɛn ahonim akanyan yɛn ma yɛayɛ adepa? Momma yɛnhwɛ nneɛma mmiɛnsa a ɛhia sɛ yɛde yɛn ahonim a yɛatete no yie sisi ho gyinae: (1) ayaresa, (2) nea yɛde gyegye yɛn ani, ne (3) asɛnka adwuma no.
DA NTEASE ADI
6. Gyinae bɛn na ɛsɛ sɛ yɛsisi fa yɛn ayaresa ho?
6 Bible ka sɛ ɛnsɛ sɛ yɛyɛ nneɛma a ɛbɛpira yɛn, na ɛnsɛ sɛ yɛyɛ ade tra so wɔ nneɛma bi te sɛ adidi ne ɔnom mu. (Mmebusɛm 23:20; 2 Korintofoɔ 7:1) Sɛ yɛde afotu a ɛwɔ Bible mu yɛ adwuma a, ɛbɛtumi aboa yɛn ma yɛanya apɔwmuden. Nanso, yɛtumi yare, na yɛbɔ nkwakoraa ne mmerewa. Sɛ ɛba saa a, gyinae bɛn na ɛbɛhia sɛ yɛsisi? Aman bi so no, aborɔfo nnuro ne nhabannuro nyinaa wɔ hɔ. Anuanom mmarima ne mmaa kyerɛw Betel bere nyinaa bisa wɔn ayaresa ahorow ho nsɛm. Anuanom pii bisa sɛ, “Yehowa somfo bɛtumi agye ayaresa wei anaa foforo bi atom?”
7. Yɛbɛyɛ dɛn atumi asisi gyinae wɔ mogya ho?
7 Sɛ mpo Kristoni bi bisa Betel anaa n’asafo mu mpanyimfo sɛ ayaresa bɛn na ɔnnye ntom a, Betel anaa n’asafo mu mpanyimfo nni tumi a wɔde bɛkyerɛ no nea ɔnyɛ. (Galatifoɔ 6:5) Nanso, asafo mu mpanyimfo bɛtumi ne Kristoni bi asusu nea Yehowa asɛm ka ho ma aboa no ma watumi asi gyinae pa. Ebi ne sɛ, Yehowa ahyɛ yɛn sɛ yɛntwe yɛn ho mfi mogya ho. (Asomafo no Nnwuma 15:29) Saa ahyɛde yi boa Kristoni ma ɔhu sɛ ɛnsɛ sɛ ɔpene so ma wɔde mogya anaa emu nneɛma atitiriw nnan no mu biara sa no yareɛ. Saa asɛm yi bɛtumi aboa Kristoni bi ma ɔde n’ahonim adi dwuma bere mpo a ɔresi gyinae sɛ ɔbɛgye anaa ɔrennye mogya mu nneɛma nketenkete bi no. Wɔnya mogya mu nneɛma nketenkete yi fi mogya mu nneɛma atitiriw nnan no mu. * (Hwɛ ase hɔ asɛm no.) Bible mu afotu foforo bɛn na ɛbɛtumi aboa yɛn ma yɛasisi gyinae pa wɔ ayaresa ho?
8. Ɔkwan bɛn so na Filipifoɔ 4:5 bɛtumi aboa yɛn ma yɛasisi gyinae pa wɔ ayaresa ho?
8 Mmebusɛm 14:15 ka sɛ: “Ogyimfoɔ gye nsɛm nyinaa di, na onitefoɔ hwɛ n’anammɔn yie.” Ɛnnɛ, yareɛ ahorow bi wɔ hɔ a wɔnnya nnyaa ano aduro. Enti ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yie wɔ nnuro bi a wɔkyerɛ sɛ ɛtumi sa yareɛ bi nanso adanse biara nni hɔ a ɛkyerɛ saa no ho. Paulo kaa sɛ: “Momma nnipa nyinaa nhunu mo nteaseɛ.” (Filipifoɔ 4:5) Sɛ yɛwɔ ntease a, ɛbɛboa yɛn ma yɛde yɛn adwene asi Yehowa som so sen sɛ yɛde yɛn adwene bɛsi ayaresa ho nsɛm so. Sɛ yɛma ayaresa ho nsɛm bɛyɛ ade titiriw wɔ yɛn asetenam a, ɛbɛtumi ama yɛayɛ pɛsɛmenkominya. (Filipifoɔ 2:4) Yɛnim sɛ yɛrentumi nnya apɔwmuden a ɛdi mũ wɔ saa wiase yi mu. Enti, hwɛ sɛ wobɛma Yehowa a wobɛsom no no ayɛ ade titiriw wɔ w’asetena mu.—Kenkan Filipifoɔ 1:10.
Wobɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ afoforo ma wɔayɛ nea wosusu sɛ eye? (Hwɛ nkyekyɛm 9)
9. Ɔkwan bɛn so na Romafoɔ 14:13, 19 bɛtumi aboa yɛn ma yɛasisi ayaresa ho gyinae, na dɛn na ɛbɛtumi ama baakoyɛ a ɛwɔ asafo no mu asɛe?
9 Kristoni a ɔwɔ ntease renhyɛ afoforo sɛ wɔnyɛ nea n’adwene yɛ no sɛ eye. Ɔman bi mu no, awarefo bi hyɛɛ afoforo nkuran sɛ wɔnnom aduannuro bi na wɔnni nnuan pɔtee bi. Wɔtumi maa anuanom binom yɛɛ nea na wɔreka no, nanso ebinom anyɛ. Bere a anuanom mmarima ne mmaa pii anhu mfaso biara wɔ aduannuro a wɔnomee ne nnuan a na wɔdi no so no, wɔn bo fuwii. Ná awarefo no ankasa wɔ hokwan sɛ wɔnom aduannuro na wɔdi nnuan pɔtee bi. Nanso, so na ntease wom sɛ ayaresa nti wɔbɛma baakoyɛ a ɛwɔ asafo no mu asɛe? Tete Roma no, na ɛsono adwene a Kristofo binom kura wɔ nnuan ne afahyɛ ahorow bi ho. Afotu bɛn na Paulo de maa wɔn? Ɔkaa sɛ: “Obi bu da bi sene bi; ɔfoforɔ nso bu nna nyinaa pɛ; momma obiara adwene nsi no pi.” Momma yɛnhwɛ yie na yɛanto afoforo hintidua.—Kenkan Romafoɔ 14:5, 13, 15, 19, 20.
Hwɛ sɛ wobɛma Yehowa a wobɛsom no no ayɛ ade titiriw wɔ w’asetena mu
10. Adɛn nti na ɛnsɛ sɛ yɛkasa tia afoforo wɔ gyinae a wɔsisi ho? (Hwɛ mfoni a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
10 Ɛtɔ mmere bi a, ebia yɛrente nea enti a asafo no muni bi si gyinae bi no ase. Sɛ ɛba saa a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ? Ɛnsɛ sɛ yɛpere yɛn ho bu no atɛn anaa yɛhyɛ no sɛ ɔnsesa n’adwene. Ebia ɛhia sɛ ɔtete n’ahonim yie anaa ebia n’ahonim yɛ mmerɛ dodo. (1 Korintofoɔ 8:11, 12) Anaasɛ ebia yɛn ankasa na yɛntetee yɛn ahonim yie. Ɛsɛ sɛ yɛn mu biara sisi ayaresa ne nneɛma bi ho gyinae na yɛgye nea ɛbɛfi mu aba biara to yɛn ho so.
YƐ NNEƐMA BI FA GYEGYE W’ANI
11, 12. Ɔkwan bɛn so na Bible boa yɛn ma yɛpaw nneɛma a yɛde gyegye yɛn ani?
11 Yehowa bɔɔ yɛn wɔ ɔkwan bi so a ɛbɛtumi ama yɛayɛ nneɛma bi de agyegye yɛn ani na yɛanya so mfaso. Solomon kyerɛwee sɛ ‘sereɛ wɔ ne berɛ,’ na ‘ahurihurie wɔ ne berɛ.’ (Ɔsɛnkafoɔ 3:4) Nanso, ɛnyɛ nneɛma a yɛde gyegye yɛn ani nyinaa na mfaso wɔ so, ɛma yɛn ho tɔ yɛn, anaa ɛma yɛnya abotɔyam. Ɛnsɛ sɛ yɛsɛe bere pii nso wɔ anigyede ho. Ɔkwan bɛn so na yɛn ahonim bɛtumi aboa yɛn ma yɛde nneɛma a Yehowa pene so agyegye yɛn ani na yɛanya so mfaso?
‘Sɛ ɛyɛ me sɛ menyɛ adebɔne a, m’ahonim bɔ me kɔkɔ anaa?’
12 Bible bɔ yɛn kɔkɔ wɔ “ɔhonam nnwuma” ho. Ɔhonam nnwuma no bi ne “adwamammɔ, afĩdeɛ, ahohwie, abosonsom, ahonhonsɛmdie, nitan, ntawantawadie, ahoɔyaa, bobɔne, mansotwe, mpaepaemu, fekusɛm, anibereɛ, nsaweɛ, anigyeɛ ntrasoɔ, ne nneɛma a ɛtete saa.” Paulo kaa sɛ “wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi rennya Onyankopɔn ahennie.” (Galatifoɔ 5:19-21) Enti yɛbɛtumi abisa yɛn ho sɛ: ‘M’ahonim boa ma metwe me ho fi agodie a anuɔdensɛm, akansi, ɔmampɛ honhom, anaa basabasayɛ wom ho? Sɛ ɛyɛ me sɛ menhwɛ sini a ponografi anaa adwamansɛm wom anaa nea ɛhyɛ ɔbrasɛe, asabow, anaa ahonhonsɛm ho nkuran a, m’ahonim bɔ me kɔkɔ anaa?’
13. Ɔkwan bɛn so na afotu a ɛwɔ 1 Timoteo 4:8 ne Mmebusɛm 13:20 no bɛtumi aboa yɛn wɔ nneɛma a yɛde gyegye yɛn ani ho?
13 Bible nnyinasosɛm bɛtumi aboa yɛn ma yɛatete yɛn ahonim wɔ nneɛma a yɛde gyegye yɛn ani ho. Bible ka sɛ “apɔmutenetene so wɔ mfasoɔ kakra.” (1 Timoteo 4:8) Nnipa pii te nka sɛ sɛ wɔtenetene wɔn apɔw mu a, ɛboa wɔn akwahosan. Nanso, sɛ yɛpɛ sɛ yɛne nnipa dodow bi bom tenetene yɛn apɔw mu nso ɛ? Nnipa biara kɛkɛ na ɛsɛ sɛ yɛne wɔn bom yɛ saa? Mmebusɛm 13:20 ka sɛ: “Deɛ ɔne anyansafoɔ nante no bɛyɛ onyansafoɔ, na deɛ ɔne nkwaseafoɔ bɔ no, ɛbɛwie no bɔne.” Ɛda adi sɛ sɛ yɛrepaw nneɛma a yɛbɛyɛ de agyegye yɛn ani a, ɛsɛ sɛ yɛde ahonim a yɛde Bible atete no no di dwuma.
14. Ɔkwan bɛn so na abusua bi de Romafoɔ 14:2-4 yɛɛ adwuma?
14 Christian ne Daniela wɔ mmabaa baanu. Christian kaa sɛ: “Bere bi a yɛreyɛ Abusua Som no, yɛsusuu nneɛma a yɛde gyegye yɛn ani ho. Yɛn nyinaa gye toom sɛ nneɛma bi a yɛde gyegye yɛn ani yɛ papa na ebi nso nyɛ papa. Yɛbisaa sɛ, hena na ɛfata sɛ yɛne no bɔ? Yɛn mmabaa no baako kaa sɛ bere a wɔregye wɔn ahome wɔ sukuu no, Adansefo mmabun bi yɛɛ nneɛma bi a ɔsusu sɛ ɛmfata. Ɛyɛɛ no sɛ ɔno nso nyɛ bi. Yɛsusuu ho sɛ yɛn mu biara wɔ ahonim, na ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ahonim kyerɛ yɛn kwan ma yɛpaw nneɛma a yɛde bɛgyegye yɛn ani ne nnipa a yɛne wɔn bɛbom agye yɛn ani.”—Kenkan Romafoɔ 14:2-4.
W’ahonim a wode Bible atete no no bɛtumi aboa wo ma woakwati asiane (Hwɛ nkyekyɛm 14)
15. Sɛ yɛreyɛ nneɛma a yɛde bɛgyegye yɛn ani ho nhyehyɛe a, ɔkwan bɛn so na Mateo 6:33 bɛtumi aboa yɛn?
15 Bere tenten ahe na wode gye w’ani? So wode nneɛma bi te sɛ asafo nhyiam, asɛnka, ne Bible a wobɛsua di kan wɔ w’asetenam, anaasɛ wode anigyede na ɛdi kan? Emu nea ɛwɔ he na ɛho hia wo paa? Yesu kaa sɛ: “Enti, monkɔ so nhwehwɛ ahennie no ne Onyankopɔn tenenee kane, na ɔde nneɛma a aka yi nyinaa bɛka ho ama mo.” (Mateo 6:33) Sɛ woresisi nneɛma a wobɛyɛ ho gyinae a, so w’ahonim ma wokae Yesu afotu no?
WƆHYƐ YƐN NKURAN SƐ YƐNKA ASƐMPA NO
16. Ɔkwan bɛn so na yɛn ahonim hyɛ yɛn nkuran ma yɛka asɛmpa no?
16 Ahonim a yɛatete no bɔ yɛn kɔkɔ wɔ nneɛma bɔne ho, na ɛsan nso hyɛ yɛn nkuran ma yɛyɛ nneɛma pa. Emu baako ne sɛ ɛma yɛka asɛmpa no wɔ afie afie, na yɛka kyerɛ wɔn a yɛhyia wɔn mmɔnten so ne mmeae ahorow nso. Saa na Paulo yɛe. Ɔkaa sɛ: “Ɛyɛ ahyɛdeɛ a ɛda me soɔ. Na sɛ manka asɛmpa no a, anka mennue!” (1 Korintofoɔ 9:16) Sɛ yɛsuasua Paulo a, yɛbɛnya ahonim pa, efisɛ yɛbɛhu sɛ yɛreyɛ adepa. Sɛ yɛka asɛmpa no kyerɛ afoforo a, yɛboa wɔn ma wɔde wɔn ahonim yɛ nea ɛtene. Paulo kaa sɛ: “Yɛda nokorɛ no adi de di yɛn ho adanseɛ kyerɛ nnipa ahonim nyinaa, Onyankopɔn anim.”—2 Korintofoɔ 4:2.
17. Ɔkwan bɛn so na onuawa ababaa bi tiee n’ahonim a ɔde Bible atete no no?
17 Bere a Jacqueline dii mfe 16 no, ɔsuaa abɔde a nkwa wom ho ade wɔ sukuu. Saa bere no na wɔrekyerɛkyerɛ sukuufo no adannandi ho ade. Jacqueline kaa sɛ: “Esiane sɛ na m’ahonim haw me nti, mantumi ankasa pii sɛnea sɛ yɛresua adeɛ a na metaa yɛ no. Ná merentumi nnye adannandi nkyerɛkyerɛ no ntom. Mekɔɔ ɔkyerɛkyerɛfo no nkyɛn kɔkaa nea megye di kyerɛɛ no. Ɛyɛɛ me nwonwa sɛ ɔtee n’anim tiee me, na ɔmaa me kwan ma mekyerɛkyerɛɛ adebɔ mu kyerɛɛ sukuufo no nyinaa.” Jacqueline bo tɔɔ ne yam efisɛ ɔhuu sɛ ɔtiee n’ahonim a ɔde Bible atete no no. So w’ahonim kanyan wo ma woyɛ nea ɛtene?
18. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛnya ahonim pa a ɛbɛtumi akyerɛ yɛn kwan yie?
18 Yɛn botae ne sɛ yɛde Yehowa nnyinasosɛm bɛbɔ yɛn bra. Na yɛn ahonim bɛtumi aboa yɛn ma yɛadu saa botae no ho. Sɛ yɛsua Onyankopɔn Asɛm daa dwendwene ho, na yɛde nea yɛsua no bɔ yɛn bra a, yɛbɛtete yɛn ahonim. Sɛ yɛyɛ saa a, saa akyɛde pa yi bɛkyerɛ yɛn ɔkwampa a yɛbɛfa so abɔ yɛn bra sɛ Kristofo!
^ nky. 7 Hwɛ “Nsɛmmisa a Efi Akenkanfo Hɔ” wɔ June 15, 2004, Ɔwɛn-Aban, kratafa 29-31.
Sɛ yɛresisi gyinae a, ɔkwan bɛn so na yɛn ahonim a yɛatete no no bɛtumi aboa yɛn?
Ahonim: Ɛyɛ biribi a ɛwɔ yɛn mu a ɛma yɛhu nea ɛtene ne nea ɛntene. Ɛtumi boa yɛn ma yɛyɛ adepa na ɛtumi ma yɛkwati adebɔne nso. Sɛ yɛtete yɛn ahonim na yɛtie no a, ɔdɔ a yɛwɔ ma Yehowa ne ne mu gyidi a yɛwɔ bɛyɛ kɛse